कोरोना भाइरससँग ल’ड्न के–के खाने ? जनस्वास्थ्य विज्ञ पाण्डेका सुझाव पढौं पूरा पढेर सक्दो शेयर गरौ
डा. रवीन्द्र पाण्डेकोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले अहिले संसार आ’क्रान्त छ । नेपाल पनि यसको उच्च जो,खिममा रहेका कारण सरकारले विभिन्न हिसाबले चे’तनाका काम गरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो दैनिकीमा केही व्य,वहार लागू गरे कोरोनासँग ल’ड्न सकिन्छ ।हाम्रो आकाश तथा धरतीमा करोडौं कि’टाणु छन् । त्यस मध्ये नोबेल कोरोना एउटा भाइरस हो ।रो’ग त्यसलाई लाग्छ, जसको रो’ग प्र’तिरोधात्मक क्ष’मता कम हुन्छ । रो’गसँग ल’ड्ने क्ष’मताको बिकास गरेमा यस्ता खहरे रो’गसँग ड’राउनु पर्दैन । रोग प्र’तिरोधात्मक क्ष’मता बढाउन निम्न उपाय अ’बलम्बन गरौँ ।